Nhau - High voltage programmable power supply
Inogadziriswa DC Power Supply
Huyssen simba mutengesi wepasi rose weHigh Voltage Programmable DC Power Supplies. Tine nhevedzano yeDC inogoneka magetsi emagetsi anonyanya kukodzera mune chaiyo uye yakaringana inoenderera DC zvikumbiro uko yakagadzikana uye inodzorwa zvakanaka inobuda voltage uye ikozvino yakakosha. Zvinhu izvi zvinorongwa zvakakwana kubva pa0.1% kusvika ku100% yevoltage yakayerwa/yazvino, nehupamhi hwepamusoro uye yakasimba ripple/regulation performance.
Yedu DC magetsi emagetsi akasiyana siyana programmable switching magetsi emagetsi ane chaiyo murabhoritari kuita. Ivo vanopa kuchinjika uye kutonga kunodiwa kune yanhasi Test & Measurement, ATE uye Laboratory application.
Iyo inodzorwa nedhijitari yepamberi pani iri nyore kushandisa uye inopa chaiyo manyorero ezvigadziro zvemagetsi ekubuda kwemagetsi. Iyo yakamisikidzwa RS232/485 yedhijitari serial interface iri muyakajairwa pasuru, kuchengetedza nzvimbo uye kubvumira inosiyana-siyana kure kuseta uye kutaurirana nemagetsi ega ega.
Yedu programmable magetsi ekushandisa ane akawanda ekushandisa, senge relay kuchembera system, mota bvunzo system, capacitor kuchembera bvunzo, LED mwenje bvunzo system, geothermal system, aerospace, kuyedza zviridzwa, simba idzva, nezvimwe.
Takatanga chirongwa-inodzorwa magetsi emagetsi ane yakakwira kubuda voltage. Mhepo inobuda inosvika 20kV, uye kushanda kwesimba kunogutsa.
Tichiri kugadzira mamwe magetsi emagetsi akasiyana-siyana. Kana iwe uchida kugadzirisa akasiyana magetsi emagetsi, ndapota taura nesu!
Programmable Power Supply, Customized Power Supply, Variable Power Supply, Led Strip Light Power Supply, Dc Power Supply, switch mode power supply,